Ụbọchị My Pet » Olee otú Nọgidenụ a Imezu Mmekọrịta
emelitere ikpeazụ: Jan. 16 2021 | 3 min agụ
Ọtụtụ di na nwunye maara na ọ na-ama: a ojuju mmekọrịta na-achọ ọtụtụ oge na ume ego. Ezie na ụfọdụ mụtara ya n'ụzọ siri ike, ndị ọzọ ghọtara site nnọọ ná mmalite na onye nwere ike na-enweghị afọ ojuju a mmekọrịta na-enweghị ndidi na udo onwe mbụ niile. Ọ bụrụ na ị na-achọ na mmekọrịta gị na ị na-eche na ị bụ n'ụzọ zuru okè obi ụtọ na ụzọ ọ bụ ugbu a, unu mara na a mmalite dị mmā na mma ọ bụ onwe gị. Onwe ibu na onye mmepe bụ igodo bụghị nanị na gị onwe gị obi ụtọ, kamakwa a obi ụtọ na afọ ojuju ná ndụ dị ka di na nwunye. Ị nwere ike ghara ịgbanwe onwe gị ma ọ bụ mmekọrịta gị na a gbawara n'etiti abụọ, ma ebe a bụ ụfọdụ ihe na-atụle:
1. Obi Ụtọ na-abịa site n'ime
Nke ahụ na-ekwu, ị mara na onye gị na nanị ihe mgbaru ọsọ ná ndụ bụ ghara ime ka i nwee obi ụtọ mgbe ị na-anọdụ na-eme ihe ọ bụla banyere ya. Na-atụ anya obi ụtọ nanị akụ aka n'ọnụ ụzọ gị bụ kama nzuzu. A ojuju mmekọrịta na-agụnye mmadụ abụọ na-akwanyere ùgwù na-eche banyere onye ọ bụla ọzọ. Onye ọ bụla onye òtù ọlụlụ na-ewe ihe si mmekọrịta, kamakwa ọ na-ihe n'ime ya. Ezie na ịhụnanya nwere ike ịbụ ndị ìsì na-adabere n'ihe ụfọdụ, ọ na-adịghị ga-abụ onwe. Ya mere, adịghị atụ anya na ndị ọzọ na-eme gị obi ụtọ. Tinye n'ime gị onwe gị; ịmụta otú inwe obi ụtọ iji na-eme ka gị na di na nwunye obi ụtọ.
2. Wepu doo si gị onwe gị anya
Otu agadi okwu na-akụziri anyị na-akpa na-plank nke anyị onwe anyị anya, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ike ịhụ n'ụzọ doro anya na naanị e mesịa wepụ speck si onye ọzọ anya. Kedu ihe nke a pụtara? Lee mbụ na onwe gị n'enyo, achọpụta ma na-agbalị na-arụ ọrụ gị flaws tupu-akọwa onye gị si misshapes. Enweghị ada na ndị ọzọ na ókè na-aga n'ihi na onwe ikpe, bee onye gị na ụfọdụ slack, kwụsị na-ekiri ya / ya ọ bụla otu nditọete site a etokwa iko, ma gbalịa ịghọta omume ha kama na-ekpe ikpe ha. Oge ọzọ ị nwere ọbụna ndị nwetụrụ di na nwunye esemokwu, kama na-agbalị na-etinye ụta na onye ọzọ, jụọ onwe gị ihe ị mere ihe ọjọọ. Gbalịa ịchọta ụzọ nke na-ezere esemokwu, na, mgbe ndị dị otú a ghọtahiere, na-eche nke a ngwọta dozie ya n'udo.
3. Nọgidenụ na-jụụ
N'ihi ya, ọtụtụ mmekọrịta na-ezighị ezi n'aka naanị n'ihi na di na nwunye na-enwe warrior àgwà. A ojuju mmekọrịta bụghị a n'ọgbọ agha. Ị adịghị mkpa ọgụ onye gị ma ọ bụ gụọ gị mmeri dị ka a elu akara agaghị enyere gị obi ụtọ. Kama, na-agbalị ka ị na-nwayọọ na inwe ndidi na onye gị na. Na-eche na onye gị na abụghị onye iro gị, na mgbe ọ bụla ị chọrọ ka olu gị, na-a miri emi ume na-ezere onwe gị. Chere ruo mgbe i na-enwe ike ikwu okwu ya site na-eji nwayọọ, na ị ga-ahụ na ihe.
4. Kpakọọrọ ike ntọala ka mmekọrịta gị
Dị nnọọ ka a siri ike ụlọ e wuru na ntọala ndị siri ike, a afọ ojuju na-enwe mmekọrịta wuru na ike ndị. Nke a pụtara na ị ga-eme ihe n'eziokwu na-onye gị na, ọtụtụ ihe, onwe gị site nnọọ ná mmalite. Gịnị mere ị ga-aga dị ukwuu iji zoo flaws ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ a ga-eme n'ọdịnihu ọnụ? Ndị ọzọ ga-emecha na-achọpụta gị ike ọgwụgwụ ihe. Ò nwetụla mgbe ị chere na gị na onye òtù ọlụlụ pụrụ n'ezie n'anya na n'akụkụ gị nke na ị na-atụle na-ezighị ezi?
5. Ẹkûkpa nrọ gị
Ònye gwara gị na iji a ojuju mmekọrịta na-enwe obi ụtọ na i nwere nye elu nrọ gị? Ọ bụrụ na ị na-eche na nke a bụ onye gị na si chọrọ, e nwere abụọ nhọrọ: ma ị nwetara ya / ya na-ezighị ezi, ma ọ bụ na ọ bụghị onye na-. Ma ịchọ ọdịmma onwe onye, ma ọ bụ selflessness mejupụtara àgwà ziri ezi n'ihi na a adabako mmekọrịta. Na ntụle, a ike ịhụnanya ediomi pụtara na abụọ support na-agba ume ọ bụla ọzọ na-achụso nrọ ha. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na gị onwe gị chọrọ na ihe mgbaru ọsọ na-adịghị mkpa, adịghị anya ị ga inwe nkụda mmụọ na-emezughị. Nke a ebe ị chọrọ ka mmekọrịta gị na-aga?